Talibaan Kabuuliin To’atee Ennaa Jirutti Siiviloonnii fi Diplomaatonni Gamasii Ba’uuf Yaalaa Jiran
Buufatni xiyyaaraa Afgaan lammiiwwan Afgaanistan kumaan laka’aman kanneen gamasii ba’uuf yaalaa turaniin guutamee, Hagayya 16, 2021
Loltoonni Talibaan kabuliin qabatanii guyyaa tokko booda buufati xayyaara sadarkaa addunyaa magaalattii har’a lammiiwwan Afgaanistan kumaan laka’aman kanneen gamasii ba’uuf yaalaa turaniin guutamee ture.
Loltoonni Ameerikaa eegumsa naannoo sanaaf jecha rasaasa akeekkachiisaa dhukaasaa ennaa turanitti biyyoonni gama dhiyaa lammiiwan isaanii fi hojjettootaa fi kanneen erga waggoota 20 qabee isaan gargaaraa turan gamsii baasuuf hojjetaa jiran.
Abbaan taayitaa daandii balalii xayyaara Afgaanistan, buufataawwan xayyaara siivilonni itti gargaaraman hanga beekisisi itti dabalaa kennamutti cufaa ta’uu beeksise.
Daandiiwwan balalii hedduun kan akka Yunaayitid, British Airways, Virgin Atlantic fi Lufthansan, naannoo qilleesnsa Afgaanistaan irraa akka fagaatan yoo ibsan, Emirate fi daandiin balalii Pakistan balalii gara Kaabulitti geggeessan dhaabuu isaanii beeksisan.
Diplomaatonnii erga embaasilee keessaa gad dhiisaniii booda biyyattii dhaa ba’uuf buufata xayyaaraa keessatti balalii eeggatgaa jiran. Xaaliyaanii, Saud Arabiyaa, Ferensaay, New Zealand, Swidinii, Awstraaliyaa fi Cheek Ripaablik biyyoota hojjettoota isaanii gamasii baasan keessaa ti.
Loltoonni Gurmuu Naga Eegumsa Gamtaa Afriikaa Namoota Nagaa Ajjeesuun Gabaasame